Job Rubere Chineke Isi (Job 1-5)
AKỤ̀ NDỊ SI N’OKWU CHINEKE | JOB 1-5
Job bi na Ọz mgbe ndị Izrel nọ n’Ijipt na-agba ohu. Ọ bụghị onye Izrel, ma, ọ na-efe Jehova, na-erubekwara ya isi. Ọ mụrụ ọtụtụ ụmụ, nwee ọtụtụ akụnụba, a makwa ya ama n’obodo ya. Ndị mmadụ na-ejikarị ndụmọdụ o nyere ha akpọrọ ihe. Ọ na-ekpe ikpe ziri ezi. Ọ na-enyekwara ndị ogbenye aka.
Job gosiri na ihe ka ya mkpa ná ndụ bụ irubere Jehova isi
Setan ma na Job na-erubere Chineke isi. Ma, o kwuru na ihe mere o ji erubere ya isi bụ maka na Chineke gọziri ya
Setan kwuru na ihe mere Job ji na-efe Jehova bụ maka ihe ọ na-erite n’aka ya
Jehova hapụrụ Setan ka ọ nwaa Job ka a mata nke bụ́ eziokwu. Setan lara ihe niile Job nwere n’iyi, gbuokwa ụmụ ya
Mgbe ọ hụrụ na Job ka nwere okwukwe n’ebe Chineke nọ, o kwuziri na onye ọ bụla na-erubere Chineke isi ga-akwụsị irubere ya isi ma ihe siere ya ike
Job emehieghị, o kwujọghịkwa Chineke
mailto:?body=Job Guzosiri Ike Mgbe Ọnwụnwa Bịaara Ya%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016086%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Job Guzosiri Ike Mgbe Ọnwụnwa Bịaara Ya